Ukudityaniswa kweCombo yeMveliso, uKhetho, kunye neemvakalelo | Martech Zone
I-Combo yokuphumelela yeMveliso, uKhetho kunye neMvakalelo
NgoMgqibelo, Julayi 17, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
The ILebhu yeJellyvision ikhuphe i-eBook encinci emangalisayo kwindlela yoKwazisa uKhetho lweMveliso. I-ebook ithelekisa indlela abaziphatha ngayo abathengi kwiivenkile ezinkulu kunye nezo zikwi-intanethi kwaye inika ubungqina bokuba isimilo siyafana.
Unokucinga ukuba ivenkile enkulu kakhulu, kodwa iJellyvision isikhumbuza ukuba kukho indawo engenasiphelo kwiwebhu, kunye nendlela ozazisa ngayo iimveliso kunye neenkonzo zakho zingenza wonke umahluko. Nazi izifundo ezifundiweyo (umxholo ocatshulweyo kunye nokuchazwa kwi-eBook):
Iimveliso ezingakumbi, Abathengi abonwabileyo -Ukuba uzama ukuba nesiza esonwabisa wonke umntu, uyakwenza into engathandwa mntu. Yenza amacandelo ahlukeneyo ukuze uthandwe licandelo ngalinye. Makuthengiswe imveliso efanelekileyo kubathengi abalungileyo. Izixhobo: I-Ketchup Conundrum.
Kodwa… ukhetho oluninzi, ukuthengisa okumbalwa -Izinto ezininzi onokukhetha kuzo kwiphepha elinye ziya kubabhida iindwendwe kwaye baya kuhamba. Banike ngeendidi kunye neefilitha ukuze bakwazi ukufihla into abangayifuniyo.
Akukho Mvakalelo, Akukho Zigqibo -Ngaphandle kweemvakalelo, ingqondo ihlalutya kwaye ithelekise, ihlalutye kwaye ithelekise, ihlalutye kwaye ithelekise ngaphandle kokufikelela kwisigqibo-uya kuba ukungazithembi. Iimvakalelo zezona zikwenza ukuba uthathe isigqibo phakathi kweendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
I-eBook iya kwiinkcukacha ezithe kratya kwaye ibuyise zonke izigqibo kwakhona. Khuphela xa ufumana ithuba kwaye uqiniseke ngokulandela ibhlog yeJellyvision, Ingxoxo.
Steve Jobs: Bayeke badle ityala!
Imfihlo eNtsha yokuGqibela yokuKhokela esiPhezulu se-10
Jul 19, 2010 ngo-10: 34 AM
Ukungabi ngumlandeli weKetchup ndafumana iKetchup Conundrum ifundeka ngokumangalisayo. Kubonakala ngathi kukho isifundo sentengiso apho kwenye indawo.